Tsara vidy sy MPA Mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampiasana ny fampiasana maharitra ny harena an-dranomasina amin'ny alàlan'ny mizana maromaro. ref Mihamaro tokoa ny tambazotra marefo amin'ny MPA dia ampiharina mba hampitombo ny tombontsoa amin'ny fiarovana amin'ny sehatra marobe ary hampiely ny loza ateraky ny fahaverezan'ny biodiversité any amin'ny faritra iray. Ny fanalefahana ny MPA ho an'ny tambazotra MPA dia ahafahana miaro ny karazana sy ny toeram-ponenana ankoatra ny fikojakojana ny tontolo iainana, ny rafitra ary ny asa.
Ity fizarana ity dia mampiditra ireo mpitaingin-tsambon'ny vatohara ho an'ireo fitsipika sy fanoloran-tena manan-danja mba hanohanana ny fivoaran'ny tambajotra MPA. Ireo fitsipika ireo dia afaka manampy ny tambajotran'ny MPA hahatratra tanjona marobe, anisan'izany ny fisian'ny fisotroan-dronono, ny fiarovana ny zavaboary ary ny fiarovana ny tontolo iainana eo anatrehan'ny fiovan'ny toetr'andro sy ny mpitarika hafa. Ireo fitsipika sy toro-hevitra ireo dia azo ampiharina amin'ny MPA efa misy na ampiasaina amin'ny fandrindrana ny tambajotra MPA ho avy, ary azo ampiharina amin'ny sehatra rehetra. Ny fampidirana ireo soso-kevitra ireo dia manome vintana tsara kokoa fa ny MPA dia ho tafavoaka amin'ny korontana ary hanohy hanome ny entana ilaina sy ny serivisy ho an'ny fiarahamonina.
Inona avy ireo fitsipika momba ny fanorenana MPA?
Ny fitsipiky ny mpiasam-paosotra MPA dia manome tari-dalana momba ny fomba hamoronana tambajotra MPA na tambatra MPA. Ireo fitsipika biophysique sy sosialy ara-ekonomika dia matetika ampiasaina hampahafantarana ny design sy ny fitantanana MPA. Ny fitsipi-ponenana biophysique dia mikendry ny hanatratra tanjona biolojika amin'ny fitazonana ny dingana biôlôjika manan-danja sy ara-batana; fa ny foto-pisainana sosialy dia mikendry ny hampitombo ny tombontsoa sy ny fampihenana ny fandaniana amin'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana sy ny orinasa maharitra.
Ity fizarana ity dia mamaritra ny fitsipiky ny famolavolana MPA mihetsika izay mampiditra ny jono, ny biodiversity ary ny tanjon'ny toetr'andro.
Ny tanjon'ireo mpitantana dia mikendry ny hampihatra ny fitsipiky ny fahalemena araka izay azo atao, ary manamarika ny fandraràna ny hetsika manimba sy ny fielezana amin'ny alalan'ny fampisehoana sy ny famokarana karazana habaka. Toro-hevitra momba ny habe sy ny halavany ny MPAs ary miaro ireo faritra manan-tantara Azo ampiasaina amin'ny fampahalalana kely kokoa matetika.
Matetika ny banga eo amin'ny sehatry ny fampahalalam-baovao, ny lafiny ara-kolontsaina sy ara-politika no misoroka ny fampiharana manontolo ny toro-hevitra. Na izany aza, ny fampiharana ireo fitsipika izay azo atao dia mampitombo ny mety ho fiarovana ny karazam-borona rehetra tsy fantatra, ary ireo dingana manan-danja; ary noho izany, manohana ny faharetana ho setrin'ny korontana.
Ny soso-kevitra manokana momba ny fanoratana dia hita ao amin'ny fizarana manaraka.